အမြစ်ကို Power Explorer ကို [root] | APK ကိုအန်းဒရွိုက်သည် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » အားလုံး Apps ကပ » အမြစ်ကို Power Explorer ကို [root]
အမြစ်ကို Power Explorer ကို [root] APK ကို
အမြစ်ကို Power Explorer ကို Root လုပ်ပြီးသားဟာ android devices တွေကိုစီမံခန့်ခွဲမယ့်အခမဲ့ရိုးရိုးဖိုင်မန်နေဂျာဖြစ်ပါတယ် 2k + 6.5 ကြယ် ratings ကျော်သန်း5ကျော်အသုံးပြုသူများသည်တာဝန်ထမ်းဆောင်နှင့်ရှိနေသည်။ ၎င်း၏ Root explorer ကို / Root browser ကိုစွမ်းရည်ကိုသင် data နဲ့စနစ်က directory များ browse ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာအစအခမဲ့ကြော်ငြာများဗားရှင်းနဲ့ဝယ်ယူနိုင်သည့်အမြစ်ဝင်ရောက်ခွင့်နှင့်ထိုအခါ Busy Box installer ကိုအတည်ပြုရန်တစ်နေရာလေးကိုအမြစ်စစ် utility ကိုအတူလာပါတယ်။ စမ်းသပ်ပြီးနှင့် Android7Nougat အပေါ်လုပ်ဆောင်နေ။Root ပါဝါ Explorer ကိုအမြစ်ဟာ android devices များနှင့်အတူကယ့်ကိုကောင်းစွာအလုပ်လုပ်တယ်သော်လည်းကိုလည်း Non-Root လုပ်ပြီးသား device များအတွက်တစ်ဦး Ultimate ဖိုင်မှတ်တမ်း Manager ကိုကိရိယာတခုဖြစ်တယ်။ ပုံမှန်အားဖြင့်ဒါဟာသင်နှင့် Windows တွင် Mac နှင့် Explorer ထဲမှာ Finder ကဲ့သို့သင်၏သိုလှောင်မှုဆိုကနေကူးယူရွှေ့အမည်ပြောင်း, delete သို့မဟုတ်ရှယ်ယာဖိုင်များခွင့်ပြုပါတယ်။ ဒါဟာအစငျသညျအမျိုးအစားအလိုက်သင့်ဖိုင်များ browse နှင့်ရယူပေးနိုင်ပါတယ်။
သငျသညျ Root ရှိပါကပင်တွေ့ရခဲသောဒေတာများနှင့် system directory များအားလုံးသင့်ရဲ့ဖိုင်တွေနဲ့ဖိုင်တွဲမှဝင်ရောက်ခွင့်ကိုရယူလိုက်ပါ
►File Manager ကို: သင်အကွိမျမြားစှာကို Select လုပ်ပါ, ဖြတ် / မိတ္တူ / Paste ကိုသုံးပြီးသင့်ရဲ့ Desktop ပေါ်မှာလုပ်ပေးမယ့်လိုပဲသင့်ရဲ့ဖိုင်များကိုစီမံ Move, Create, ဖျက်ပစ်ပါ, Rename, ရှာဖွေရန်, ဝေမျှမယ်, Send, သော့ခတ်ခြင်းနှင့် Bookmark ။
ပုံငယ်များ►Shows: APK များနှင့်ရုပ်ပုံများကိုများအတွက်
►Material Themes:6ပစ္စည်း themes များသင်အကြိုက်ဆုံးဖိုင်ရှာဖွေသူစိတ်ကြိုက်
►Root Explorer ကို / Root browser ကို: အမြစ်အသုံးပြုသူများအတွက်ဖိုင်ကိုစီမံခန့်ခွဲမှု tools များ၏အန္တိမထား။ တစ်ခုလုံးကိုဖိုင်စနစ်နှင့်ဒေတာအားလုံးကို directory များဝင်ရောက်ခွင့်ပေးသည်, ထိုအသုံးပြုသူပိုင်ရှင်များ / အုပ်စုများကြိမ်မြောက်ခွင့်ပြုချက်ကိုပြောင်းလဲခွင့်ပြု
►App Manager ကို: Backup ကို, ဖယ်ရှားရန်, အသုတ်စစ်ဆင်ရေးသုံးပြီးသင့်ရဲ့ applications များဝေမျှ
ထိုအခါ Busy Box installer ကို, CPU အုပ်ချုပ်ရေးမှူးထပ်တူများကို Finder ►Inbuilt, သမိုင်းသန့်စင်တဲ့ပရီမီယံအထုပ်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အဖြစ်ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့သည်။
►Multiple tabs များထောက်ခံမှု
30 ဘာသာစကားများကိုကျော်ဘို့►Support - ဂရိ,
►Rootပံ့ပိုးမှု - ဒေတာ, cache ကိုများကဲ့သို့အမြစ် directory များ Explore ။ Copy ကူး, အမြစ် partition ကိုအတွက် file တွေကို paste နဲ့ဖျက်ပစ်ပါမည်။
►Inbuilt Root Checker ကို Utility ကိုအမြစ်ဝင်ရောက်ခွင့် status ကိုအတည်ပြုရန်
►Inbuiltအော့ဖ်လိုင်းထိုအခါ Busy Box installer ကို
►History Cleaner Utility ကို
မြန်နှုန်းမြင့်အောင်လုပ်ခြင်းသို့မဟုတ် underclocking CPU ကိုများအတွက်►SetCPU
ပုံတူဖိုင်တွေရှာဖွေ►Duplicates Finder ကို
6 themes များနှင့်အတူ►Materialဒီဇိုင်း UI ကို
►Easy, အစွမ်းထက်နဲ့အလင်း ~ 3mb
►Gestures Bookmarks ထောက်ခံမှု
►Apps backup လုပ်ထား - သင့် sd card ကိုမှ Backup ကို apps များ
►Storage Clean Up ကိုနှင့်သုံးသပ်ခြင်း
နှင့်ပိုပြီးအများအပြား options များ။
►Text Editor- တဲ့ Modify, Edit ကိုနှင့်စာသားမှတပါး, html, xml file တွေကို
မိတ္တူများအတွက်►Root Browser- အပြည့်အဝအမြစ်ဝင်ရောက်ခွင့်နှင့်ဖျက်ပစ်ပါမည်။
►Music Player- ကို Preview mp3 အနေနဲ့ external music player မသုံးဘဲ WAV, 3gp ဖိုင်တွေ
7zip နှင့် WinRAR နဲ့တူ►Zipနှင့် rar manager- ပွင့်လင်း rar / Zip / Tar ဖိုင်တွေ
►Image Viewer- Access ကိုနှင့်ကြည့်ရန်မီဒီယာနှင့်ပို။
အပြီးအစီး file system ကိုရှာဖွေရေး►Search
►Android7Nougat ကောငျးမွတျခွငျး
WRITE_EXTERNAL_STORAGE - ထိုသိုလှောင်ပေါ်ရှိဖိုင်များဖန်တီးခြင်းနှင့်ပြုပြင်မွမ်းမံသည်
READ_EXTERNAL_STORAGE - ထိုသိုလှောင်အပေါ်ဖိုင်များကိုဖတ်ရှုခြင်းများအတွက်
အင်တာနက် - bug ကိုအစီရင်ခံခြင်းနှင့်စစ်ဆေးမှုများ updates များကိုများအတွက်
RECEIVE_BOOT_COMPLETED - Root အကောင်းမြင်
ACCESS_WIFI_STATE - updates များကိုစစ်ဆေး
GET_ACCOUNTS - Verify လိုင်စင်
•ဘာသာပြန်စိတ်ဝင်စားပါသလား? kshak.apps@gmail.com မှာကျွန်တော်တို့ကိုမေးလ်
ယခုကျနော်တို့လုံးဝကြော်ငြာ-အခမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Root Explorer ကို / Root browser ကို tool ကိုရာ၌ခန့်ထားပြီဒါပေမယ့်မကြာမီကျနော်တို့ကဆက်ပြောသည်လုပ်ဆောင်ချက်တွေနဲ့ပရီမီယံဗားရှင်းနဲ့လာမယ့်ပါလိမ့်မယ်။
သငျသညျအကြှနျုပျတို့ကိုအောင်မြင်စွာသင်အကောင်းဆုံး Root Explorer ကိုအဖြစ်ဖိုင်မှတ်တမ်း Manager က tool ကိုထုပ်ပိုးနေတဲ့အာဏာကိုပေးပြီ, ကျွန်တော်တို့ကို5ကြယ်ပွဘယ်လောက်ရှိသလဲနှင့်သင့်အားပေးအားမြှောက်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းထားခဲ့ပါကျေးဇူးပြုပြီးယုံကြည်ပါ
မြန်ဆန်ပြီးဖော်ရွေထောက်ခံမှုများအတွက် kshark.apps@gmail.com မှာကျွန်တော်တို့ကိုအီးမေးလ်ပို့ပါ။ ငါတို့သည်သင်တို့၏မေးခွန်းများကိုဖြေခြင်းနှင့်သင်နှင့်အတူ troubleshoot ကူညီဖို့အတှကျဝမျးသာဖြစ်လိမ့်မည်။
☆ app ကိုထောကျပံ့ဖို့ကျွန်တော်တို့ကို5ကြယ်ပွင့်ဘယ်လောက်ရှိသလဲ ကျေးဇူးပြု.
☆သင်သည်မည်သည့်ကိစ္စများကြုံတွေ့ရပါက, kshark.apps@gmail.com ထွက်ရောက်ရှိဖို့အခမဲ့ခံစားရကျနော်တို့ 24 နာရီအတွင်းပြန်သင်ဖို့ပြန်ပြောင်းမည်မဟုတ်ပါ
အန်းဒရွိုက်7Nougat အပေါ် -Working
Root Explorer ကိုအတူ -Fixed UI ကိုဆက်ကြောင်း
တစ်ဦးပြည်တွင်း Image ကိုပြခန်း Viewer ကို -Added
-Added 15 အသစ်သောဘာသာစကားများ
-Easy ပွင့်လင်းဇစ် / rar / Tar ဖိုင်တွေ
-Permissions နှင့် Root Mode တွင်ပိုင်ရှင် / Group မှပြောင်းလဲခြင်း
startup လုပ်တင် -Faster
အမြစ်ကို Power Explorer ကို [root]
7.84 ကို MB
ဇန်နဝါရီ 11, 2017
KShark Apps ကပ
ဇန်နဝါရီလ 21, 2017 မှာ 7: 50 ညနေ
သင်သည်သင်၏မှတ်ဉာဏ်အာကာသ hampers ရသောသင်၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်အချို့မိတ္တူပွားဖိုင်များရှိသည်။
သင်အဆင်ပြေရကြလိမ့်မည်ဒီဆော့ဗ်ဝဲကိုအသုံးပြုဖို့ အကယ်. ရုံ "DuplicateFilesDeleter" ကိုအသုံးပြုပါ။